Madaafiic Lagu Garaacay Xerada Xalane. – Calamada.com
Madaafiic Lagu Garaacay Xerada Xalane.
calamada July 1, 2018 2 min read
Barqanimadii maanta ayaa Ciidamo ka tirsan guutada Madaafiicda ee Mujaahidiinta waxay weerar Madaafiic ah ku qaadeen Xerada Xalane oo ah Taliska ugu weyn ee Ciidamada Kuffaarta Africaanta ay ku leeyihiin Somaliya.
In ka badan ilaa 7 Madfac oo ayaa lagu garaacaya Saldhigyadasi, iyadoona Mafaaciicdaasi badankood ay gudaha u galeyn Xaruntaasi la beegsday.
Faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay Weerarka Madaafiicda ah iyadoona tiro ka tirsan maleeshiyaadka Murtadiinta iyo Ciidamada Kuffaarta Africaanta ay dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen weeraradasi.
Weeraradaan Madaafiicda ah ee maanta Mujaahidiinta ay ku qaadeen Xeada Xalane ayaa ku soo aadaya xili maanta inta bdan wadooyinka Muhiimka ee magaalada Muqdisho ay xireen maleeshiyaadka Murtadiinta iyo Ciidamada Kuffaarta Africaanta , Taasi oo ay ku sheegeen in ay ku sugayaan Amniga Magaalada Muqdisho.
Xerada Xalane oo ah Taliska ugu weyn ee Ciidamada Kuffaarta Africaanta ayaa sidoo kale waxay xarun u tahay Safaarada dhowr ah oo ay leeyihiin Dowladaha gaalada oo ay ka mid tahay Dowlada Ingiriiska iyo Hayadaha Gaalada ee QM hoos taga.
Sidoo kale xeradaasi waxey xarun ay u tahay in 150 Shirkadooda gaallo ah kuwaasi saldhigyo ku leh xaruntaasi .
Waxaana sidoo kale xusid mudan in xerada Xalane ay ku sugan yihiin Ciidamo Shishey oo ka socda Dowladaha Saliibiyiinta ee duulllaanka ku soo qaaday Somaliya .
Mujaahidiinta ayaa dhowr jeer weeraro isku jira Camaliyaad istish haadi iyo duqeymo ku qaaday xeradaan laga soo abaabulo duulaanka Shareeca la dagaallanka ah.
Dhanka kale Mujaahidiinta waxey weerar Qarax ah la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen Maleeshiyaad ka tirsan Murtadiinta oo ku taalla isgooska Baar u baxa ee Magaalada Muqdisho,waxaa qaraxaasi lagu dhaawacay Askari ka tirsanaa maleeshiyaadkii la weeraray.
Xigasho Idaacada Islaamiga Andalus.
Previous: Ibraahim Cali Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 17-Shawaal-1439 Hijri.